....कार पीडितलाई निसाफ - Aaha Sanchar
२०७५ आश्विन २१, आईतवार ०८:५२
कार पनि कस्ता अनौठा बिनौठा हुँनु पर्या हो खै ? बेकार, धिकार, शिकार, अकार, हकार, खकार, झकार, चकार, चीतकार, गीतकार, सीतकार, खीतकार, हीतकार, लत्कार, बलात्कार, सत्कार, चाटुकार, उपकार, गुनकार, खुनकार, सुनकार, उनकार, नुनकार, मूर्तीकार, कुच्चीकार, फुच्चीकार, सूच्चीकार, सूर्तीकार, पूmर्तीकार कति हो कति । कारैकारको यो दुनियाँमा जर्मिनु धिकार छ । तवाँइको नामै सुन्दा डकार आउँछ भन्नु हुन्च । अइचेल अरु कार भन्दा बलात्कार खुप्पै चम्क्याउ छ । यज्ञ छारी महायज्ञ ला पनि यो कम्किने कुरै छैन् । यसको हाँकदाक सुन्दा अरु सप्पै कारहरू बेकार लाक्च भन्नु हुन्च । कारभित्रै शिकार गर्ने कालाकार पनि धेरै छन् । विद्वानले बेकार मुर्खीले धिकार भन्छ र मात्रै, नत्र ? कार्आ छतमा बसिकन सवार गर्दा यसको जार भेटिन्छ । ह्वाँची, ठाँटेको, आँटेको र ढाँटेको सप्पै धोको मेटिन्छ । जैहोस् यो दुनियामा कारको ठूलै थुप्रो छ भनिकन कुप्रो परी झुप्रोमा ढल्दा हुन्छ । आन्नी, तवाँई हामीले कुन कार चर्दा मित्रुलाई र्वाउला र शत्रुलाई स्वाउँला भनिकन र्याल गर्दा नाम्रो होला । ऐलौ कान्मुन अन्दो छैन भन्नु हुन्च । यसले अक्कास पत्ताल, ओखा कोखा, तल माथि, भित्र भाइर, दायाँ वायाँ, जताततै छाम्मेल्च । ह्वाँच्ची, उइता हो नि ? त्यई भइन जो पायो त्यो कार चलाउने कोसित नगर्दा बेस होला भनिकन कार्आ भिकारीलाई सुजाब दिंदा सिङ्खोरामा हाँन्यास्तो मान्छ गाँठे ।
विकासी मानवले नयाँ नयाँ कार फलाई विलासी भइसक्यो । ह्याँन्वा मान्सलाई क्याङ् चर्यो ? श्रेष्ठ प्राणी कल्लिने, जथाभावी हल्लिने, चिसोले खल्लिने, तातोले डल्लिने, खरानी घस्ने, घुँडा धस्ने, बाठो फस्ने, लाटो बच्ने ? क्या रीत आ हुन ? त्यई भइन यै गीत गा हुँन ः क्या भनौ र खै ? तिम्लाई मज्जा भो, मै भनुला थै ! बराठ, अघिल्लो दिन माबाउले कत्रो मिनेतले कन्या पा हुन ? पछिल्लो दिन छक्कालै रेडिउँले यस्तो खप्पर फुक्छ ः “फलानो ठाउँमा अद्बैंसे किशोरी बलात्कारीको शिकार, दोखी पैचान गर्न सकस, खोजी कार्य जारी ।” लौ जा, यो ठाँरो पनि छिल्लयाउँ समाचार फुक्दा निको होइजानु पर्ने ? रिस्सै ता हुन् कष्ट्या न सष्ट्या तान्डब नृत्य मच्चाइयो । “लाई सँदैभरी रिर्वा नछार्नेलाई आज क्य भो दैव ?” पल्लो मैराबाट बुरीले प्रश्न पठाइन् । गोरुले पारीलाई, राङोले बाछीलाई, कुकुरले ढुकुरर्नीलाई, हात्तिले मुसीलाई, अजिङ्गरले माउँसुलीलाई चिलले भँगेरीलाई बलात्कार गरेका तर ज्यान चांहि नलिएका तमाम उदारणहरू मैती नभएका होइनन् । छि ! लाजौंमर्नु आफ्नै बुरीलाई कस्तोरी सुनाउँनु ? इन्तुन चिन्तु भइकन प्रसँग लफङ्याँए ः “फ्याङ्या थोरताले पाकिस्तान टिप्यो त्यइ भएर ।” झुटो जबाकले तवाँइकी बुरीलाई डोज पुगेछ, थप प्रश्न आएनन् ।
यो मुल्कमा कारपीडित कति छन् ? निसाप कतिले पा होलान ? अइचेल बोई, आमा, युवती र तरुणीहरूको तुलनामा बालिकाहरू ज्यादा कारपीडित हुँन थालेका छन् । निर्मला बाइक दिनमा कति छाउरीहरू कार हुन्छिन ? पीडितले लुकाएका, तीनआँखेलाई झुकाएका कति छन् कति ? अँ हँ, दाप्को आ पो भन्नु ? पीडितले रगत पोख्ने, आफन्तरीले सडक रोक्ने, प्रशासनले गोली ठोक्ने, कान्मुनी ज्ञाताहरूले अन्दो तराजु जोख्ने, सरकारले छानीबिनी समिति गठन गरी चोखिने । आन्नी, पीडितका आँशु कैले हो रोक्किने ? कैले हो दोखीलाई नेल ठोक्किने ? तवाँइका ठूलाबड्डाहरूको कुलमा मुल मिस्सी चन्द्र दाइने भएपछि कखो क्या लाग्च र दातौं ? जैहोस् हाम्रो कान्मुनमा बलत्कारी, ज्यानमारा, अप्रादी, पापी र परलोकीलाई फाँसीमार्ने निम छैन तर त्यस्तालाई कारबाई गर भन्दै नाराजुलुस गाउनेहरूलाई गोलीमार्ने विभस्ता छ भन्नेकुरो त्याँका लाटागाँरालाई था हुँने ? कस्तो बिडम्पना ! ह्याँका बाठाबुठीलाई त्यत्ति पनि था नहुँने ? मेरो ख्यालमा, आन्दोलन र नाराजुलुस गर्नु जुलुम भई बलात्कारीलाई थप उत्तेजित पार्नु हो । ह्याँती गर्ने कुरा, हल्ला खल्ला नगरी मेरो सल्ला मान्चौ भने बलत्कारीलाई निमेट्ने गजबको काइदा छ । आज्जैदेखि दोज्या र भविष्यका आमाहरूले गोप्या सम्जौता गरी एक छाउँली पुर्सा मात्रै जर्मादेउ तो ? त्यत्ति गरेमा न्याय माङ्न काँई धाउनुपर्दैन् । त्यो गर्नेको सजिलैसित बेठो मेटिन्छ । ह्वाँची उइता हो, मालाई गर्ने कुरै भइन बालाई बलात्कार गर्यो भने देख्जाइगा ?